लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अब्खाज अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उज्बेक उज्बेक (रोमन) उर्दू एस्टोनियन ओसेसियन काचिन काजाक किकाम्बा किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज किलुबा कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्यामा क्षोसा ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टोंगन डच डेनिश तेलगु थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोलिश फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बुल्गेरियन भियतनामिज मले मल्यालम माम्ब्वे-लुंगु मालागासी म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सिडामा सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सोमाली स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
परमेश्‍वरको एउटै मात्र नाम छ। परमेश्‍वरको नाम हिब्रू भाषामा यसरी लेखिन्छ: יהוה अनि नेपालीमा यसलाई “यहोवा” भनेर उच्चारण गरिन्छ। * आफ्नो एक जना भविष्यवक्‍ता यसैयामार्फत्‌ परमेश्‍वरले यसो भन्‍नुभयो: “म यहोवा हुँ। मेरो नाम त्यही हो।” (यसैया ४२:८) बाइबलका पुराना पाण्डुलिपीहरूमा यो नाम लगभग ७ हजार पटक उल्लेख गरिएको छ। बाइबलमा परमेश्‍वरको लागि प्रयोग गरिएका सबै पदवीहरूभन्दा, भनौं भने बाइबलमा उल्लिखित सबै मानिसको नामभन्दा परमेश्‍वरको नाम “यहोवा” धेरै पटक उल्लेख गरिएको छ। *
के यहोवाको अरू पनि नाम छ?
हुन त बाइबलले परमेश्‍वरको नाम एउटा मात्र छ भनेर बताउँछ तर परमेश्‍वरको लागि विभिन्‍न पदवी अनि अभिव्यक्‍ति प्रयोग गरिएका छन्‌। तल दिइएको सूचीमा परमेश्‍वरको लागि प्रयोग गरिएका विभिन्‍न पदवी र अभिव्यक्‍तिले परमेश्‍वरको स्वभाव र व्यक्‍तित्वबारे के बताउँछ, केही उदाहरण विचार गरौँ:
दानिएल ७:९, १३, २२
उहाँको कुनै सुरुआत छैन; कुनै पनि कुरा सृष्टि हुनुअघि नै उहाँ अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो।—भजन ९०:२.
प्रकाश १:८; २१:६; २२:१३
यसको अर्थ हो, “पहिलो र अन्तिम” वा “सुरु र अन्त।” यसबाट यहोवाभन्दा अघि कुनै सर्वशक्‍तिमान परमेश्‍वर थिएन र पछि पनि हुनेछैन भनेर स्पष्ट हुन्छ। (यसैया ४३:१०) अल्फा र ओमेगा ग्रीक वर्णमालाको पहिलो र अन्तिम अक्षर हो।
यो शब्द अरबी भाषा “अल्लाह”-बाट लिइएको हो। यो कुनै नाम होइन बरु परमेश्‍वरको लागि प्रयोग गरिने एउटा उपाधि हो, जसको अर्थ “ईश्‍वर” हो। अरबी अनि अरू भाषाको बाइबलमा “परमेश्‍वर”-लाई “अल्लाह” भनेर अनुवाद गरिएको छ।
१ तिमोथी १:११.
उहाँ खुसी र आनन्दित परमेश्‍वर हुनुहुन्छ।—भजन १०४:३१.
उहाँले खतरा र विनाशदेखि जोगाउनुहुन्छ।
कुमालेको माटोमाथि अधिकार हुन्छ, त्यसरी नै परमेश्‍वरको पनि प्रत्येक व्यक्‍ति अनि राष्ट्रमाथि अधिकार हुन्छ।—रोमी ९:२०, २१.
उहाँ आफ्नो सेवकहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ।
भजन १८:२, ४६
उहाँ शरणस्थान र उद्धारको स्रोत हुनुहुन्छ।
प्रस्थान ३४:१४, पवित्र बाइबल, संशोधित संस्करण
उहाँ अरू कसैको भक्‍ति गरिएको नसहने परमेश्‍वर हुनुहुन्छ। यसलाई परमेश्‍वर “आफ्नो बाहेक अरू कसैको भक्‍ति गरिएको सहनुहुन्‍न” भनेर पनि अनुवाद गरिएको छ।—नयाँ संसार अनुवाद.
उहाँ उपासना गर्न लायकको अनि बलवान्‌ परमेश्‍वर हुनुहुन्छ; “परमेश्‍वर” भनेर अनुवाद गरिएको हिब्रू शब्द एलोहिम बहुवचन शब्द हो। यसले यहोवाको वैभव, गरिमा वा श्रेष्ठताको वर्णन गर्छ।
मालिक; हिब्रूमा अधोन र अधोनिम।
प्रार्थना सुन्‍नुहुने परमेश्‍वर
विश्‍वाससहित गरिएको सबै प्रार्थना उहाँ सुन्‍नुहुन्छ
जीवन दिनुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ।
उहाँसित सर्वोच्च अख्तियार छ; यसको हिब्रू शब्द अधोनाइ हो।
म हुँ जो म हुँ
प्रस्थान ३:१४, पवित्र बाइबल, संशोधित संस्करण
आफ्नो उद्देश्‍य पूरा गर्नको लागि उहाँ जे पनि बन्‍न सक्नुहुन्छ। यस अभिव्यक्‍तिलाई यसरी पनि अनुवाद गरिएको छ, “म जे बन्‍न चाहन्छु, त्यही बन्‍नेछु।” (नयाँ संसार अनुवाद) यी शब्दहरूले यसपछिको पदमा उल्लेख गरिएको ‘यहोवा’ नामको अर्थ बुझ्न मदत गर्छ।—प्रस्थान ३:१५.
सबै थोक उहाँद्वारै अस्तित्वमा आए र सृजिए।—प्रकाश ४:११.
यसैया ३०:२०, २१
उहाँले उपयोगी शिक्षा र निर्देशन दिनुहुन्छ।—यसैया ४८:१७, १८.
सबैभन्दा पवित्र (नैतिक तवरमा स्वच्छ)।
मोल तिरेर छुटाउनुहुने
येसु ख्रीष्टको फिरौतीको बलिदानको आधारमा उहाँले मानिसहरूलाई फेरि किन्‍नुभयो अनि पाप र मृत्युबाट मुक्‍त गर्नुभयो।—युहन्‍ना ३:१६.
उहाँको शासनको कुनै सुरुवात अनि अन्त छैन।
सबै ईश्‍वरका पनि ईश्‍वर
उहाँ सर्वोच्च परमेश्‍वर हुनुहुन्छ; उहाँ कसै-कसैले उपासना गर्ने “व्यर्थका देवताहरू”-जस्तो हुनुहुन्‍न।—यसैया २:८.
उहाँसित असीमित शक्‍ति छ। हिब्रू शब्द एल शद्दाय, जसको अनुवाद “सर्वशक्‍तिमान परमेश्‍वर” हो, यो अभिव्यक्‍ति बाइबलमा सात चोटी प्रयोग गरिएको छ।
उहाँ सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ।
सबै थोक उहाँद्वारै अस्तित्वमा आए र सृजिए।
यसैया १:९; रोमी ९:२९
उहाँ स्वर्गदूतहरूको दलको कप्तान हुनुहुन्छ।
हिब्रू धर्मशास्त्रमा ठाउँको नाम
बाइबलमा उल्लेख गरिएका कुनै-कुनै ठाउँको नाममा परमेश्‍वरको नाम पाइन्छ तर यो नाम परमेश्‍वरको अर्को नाम भने होइन।
“यहोवा मेरो झण्डा हुनुहुन्छ।” यहोवा यस्तो परमेश्‍वर हुनुहुन्छ, जसकहाँ उहाँका सेवकहरू सुरक्षा र मदतको लागि दौडेर जान सक्छन्‌।—प्रस्थान १७:१३-१६.
उत्पत्ति २२:१३, १४
“यहोवा परमेश्‍वरले जुटाइदिनुहुन्छ।”
इजकिएल ४८:३५, पवित्र बाइबल, संशोधित संस्करण.
“यहोवा त्यहाँ हुनुहुन्छ।”
“यहोवा शान्ति हुनुहुन्छ।”
परमेश्‍वरको नाम थाह पाउनु पर्ने र प्रयोग गर्नु पर्ने कारणहरू:
परमेश्‍वरलाई आफ्नो नाम महत्त्वपूर्ण लाग्छ किनकि उहाँले बाइबलमा यो नाम हजारौं पटक उल्लेख गर्नुभएको छ।—मलाकी १:११.
परमेश्‍वरको छोरा येसुले पनि परमेश्‍वरको नामको महत्त्वबारे थुप्रै चोटि जोड दिनुभयो। उदाहरणको लागि, उहाँले यहोवालाई यसो भनेर प्रार्थना गर्नुभयो, “तपाईँको नाम पवित्र पारियोस्‌।”—मत्ति ६:९ युहन्‍ना १७:६.
यहोवासित मित्रता गाँस्नको लागि चाल्नुपर्ने पहिलो कदम भनेको परमेश्‍वरको नाम थाह पाउनु र त्यो प्रयोग गर्नु हो। (भजन ९:१०; मलाकि ३:१६) यस्तो मित्रताले तिनीहरूलाई परमेश्‍वरको यस प्रतिज्ञाबाट लाभ उठाउन मदत गर्छ: “म उसको उद्धार गर्नेछु किनकि ऊ मलाई प्रेम गर्छ, म उसको रक्षा गर्नेछु किनकि उसले मेरो नाम जानेको छ।”—भजन ९१:१४.
बाइबल यसो भन्छ: “थुप्रै ‘ईश्‍वर’ र थुप्रै ‘प्रभु’ भएझैँ चाहे स्वर्गमा होस्‌ वा पृथ्वीमा, ईश्‍वर कहलिएकाहरू त छन्‌।” (१ कोरिन्थी ८:५, ६) तर बाइबलले परमेश्‍वर एकै जना मात्र हुनुहुन्छ भनेर बताउँछ। उहाँको नाम हो, यहोवा।—भजन ८३:१८.
^ अनु.3केही हिब्रू विद्धानहरूले परमेश्‍वरको नामको लागि “याहवे” शब्द प्रयोग गर्न मन पराउँछन्‌।
^ अनु.3बाइबलमा परमेश्‍वरको नामको संक्षिप्त रूप “याह” लगभग ५० चोटि प्रयोग गरिएको छ। यो “हल्लेलूयाह” शब्दमा पनि प्रयोग गरिएको छ, जसको अर्थ हो, “याहको प्रंशसा गर।”—प्रकाश १९:१.
के परमेश्‍वर त्रिएकको भाग हुनुहुन्छ?
थुप्रै धर्मले परमेश्‍वर त्रिएकको भाग हुनुहुन्छ भनेर सिकाउँछ। के बाइबलले पनि त्यही कुरा सिकाउँछ?